दंगीशरणका महिलाहरु सिप सिक्दै – Rajmarg Online
दंगीशरण, ६ जेठ । एउटा सानो कोठामा १० जना महिलाहरु आफैमा ब्यस्त देखिन्थे । कोही दुलहि जस्तै सिङ्रीदै थिए भने कोहि सिंगार्दै थिए । हेर्दा देखिन्थ्यो कसैको बिबाहको उत्सवकालागि सिंगारमा सजिदैछन् । कोहि भर्खरैका यूवती थिए भने कोहि महिलामा गनीएका, थरथिरीका श्रींगारका सामानहरु राखिएको थियो । मन्दिर छेउको घरको कोठा भित्र छिर्दा त्यस्तै देखिन्थ्यौँ । सोहि समूहमा १९ बर्षिय सुभेक्क्षा रेग्मी एक जना महिलाको मुखको फेसिएल गर्दै थिईन् ।
विज्ञान बिषय लीएर १२ कक्षा उर्तीण गरेकि रेग्मी महिलाहरुको लागि सजिलो र पैसा छिट्टै कमाउँन सकिने पेशाा भएकाले आफुलाई ब्यूटिपार्लर सम्बन्धि तालिम सिक्न इच्छा लागेको बताईन् । “विज्ञान बिषय लिएर पढेपनि जागीर पाउँन गाह्रो छ केहि सिप नचलेपछि यस्तै काम गरेर खान पाईन्छ , ” रेग्मीले भनिन् । उनले अगाडि थपिन म बाहिर जाने योजनामा छु घरबाट पैसा माग्नु भन्दा पढ्नुको साथसाथै बाहिर पार्लर सम्बन्धि काम सजिलै पाईन्छ रे , पैसा पनि धेरै नै हुन्छ रे त्यसैले यो तालिम सिक्न थालेकि हुँ । सोहि समूह भित्रकी दंगीशरण गाउँपालिका वडा न. ४ कि पवित्रा खड्का लामो कपालको जुरो बनाउँदै थिईन् बिबाहित ती महिला दुलहि जस्तै देखिएकि थिईन् ।
उनी मुसुमुसु हास्दै एैना हेररिहेकि थिईन् । उनीलाई लाग्दैथ्योँ म फेरी दुलहि जस्तै देखिएकि छु । उनी मुसुक्क हास्दैँ भनीन “ सप्रेपछि राम्रै देखिने रैछ, उनले थपिन कसैको बिहेबारी हुँदा दुलहि सिंगार्ने मान्छे हुदैनन् , अव त हाम्ले सिंगारेम्ला ए ।” सरीता खड्काले उनको लामो कपाललाई बेटर्दै भनिन् “ अव दंगीशरणमा एउटा पार्लर राख्छम पैसा किन नकमाईएला र ।” उनीहरु यसरी राम्री बनाउँने र राम्री हुन थालेको एक महिना पुगिसकेको छ । ब्यूटिसिएन रीता भण्डारीले पार्लर सम्बनिध तालीम दिईरहेकि छिन् ।
महिलाहरु ब्यूटिसियन सम्बन्धि तालीम उतसाहपूर्वक सिकिरहेको बताईन् । उद्यौग पवद्र्धन कार्यक्रम अन्र्तगत घरेलु तथा साना उद्यौग कार्यालय दाङको आयोजना तथा दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थीक सहयोगमा ४५ दिने ब्यूटिपार्लर तालीममा १० जना महिलाहरुको सहभागिता रहेको छ । बैशाख ६ गते बाट शुरु भएको तालीम जेठ २० गते सम्पन्न हुनेछ । यस्तै वडा न. ४ मा २ महिने कटाई सिलाई तालीम संचालन भईरहेको छ । स्वर्गद्धारी शैक्षीक सदन प्रा.ली.दाङको आयोजना तथा दंगीशरण गाउँपालिका वडा न. ४ को आर्थीक सहयोगमा शुरु भइरहेको तालीममा २० जना महिलाहरुले सहभागिता जनाएका छन् ।
सिलाई कटाईमा अधिकांश दंगीशरण गाउँपालिका भित्रका थारु महिलाहरुको सहभागिता छ । लुगा सिउँन कल चलाईरहेकि देसी चौधरीले खेतीपाती गरेर पैसा कमाउँन गाह्रो भएको भन्दै सिलाई सम्बन्धि तालीम लिएर यसैमा आत्मनिर्भर हुने सोचमा रहेको बताईन् । यस्तै सुमीत्रा चौधरी पनि सिलाई ब्यवसाय बाट धेरै आम्दानी हुन सक्ने भन्दै तालीम सिक्न आएको बताईन् । अव तालीम पछि यसैलाई ब्यवसायीक रुपमा लग्छु सुमीत्राले भनिन् । सिलाई तालीमको पैशिक्षकमा दुर्गा बस्नेत रहेकि छिन् ।
बैशाख २२ गते बाट शुरु भएको तालिम जेठ २१ गते सकिने छ । उता वडा न. ४ मा रहेको टिनको छाप्रोमा १५ जना महिलाहरु कपडामा बुट्टा भर्दै गरेको अवस्थामा देखिए । घोराहि बाट सिप सिकाउँन भनी आएकि सपना बाठाँ मगरले लुगामा बुट्टा भर्न सिकाईरहेकि थिईन् । कसैले फुलको बुट्टा भरीरहेका थिए भने कसैले पात को हाँगाबिँगा फालेका रुख पनि देख्न सकिन्थ्यो त्यो एक मिटर जतीको लुगामा । हामी अव आत्मनिर्भर बन्छौँ भन्दै जोसीलो र फुर्तीलो देखिन्थे महिलाहरु । “ गाउँपालिकाले कार्यक्रम राख्याछ महिलाहरुलाई राम्रो ग¥याछ फुर्सदिला छैनम् हामी आ— आफनो गाउँमा सिप सिक्न पाछम् राम्रो लाग्याछ । ” लुगामा बुट्टा भर्दै सुजाता वि.क. ले भनीन् । ममफली चौधरी घरको काम छोडेर सिप सिक्न आएको बताईन् ।
“ कहिले काम लाग्छ, केहि उपाए नचले यस्तै बनाउने अनी बेच्ने बुट्टा भर्दै गरेको रुमाल देखाउँदै भनीन् । ” उद्यम तथा सामाजिक विकाश मञ्च नेपाल दाङको आयोजना तथा घरेलु तथा साना उद्यौग कार्यालय दाङको सहयोगमा १७ दिने हाते कढाई बुटिक तालिम सुरु गरीएको हो । यता घरेलु तथा साना उद्यौग विकाश तालिम कार्यक्रम अन्र्तगत घरेलु तथा साना उद्यौग कार्यालय दाङको आयोजना तथा दंगीशरण गाउँपालिकाको आर्थीक सहयोगमा वडा न. ३ मा ३ महिने कटाई सिलाई तालिम संचालन भएको छ । २० जना महिलाहरुको सहभागितामा भईरहेको तालिमको प्रशिक्षकमा सिमा खड्का रहनु भएको छ ।
गाउँपालिकामा महिलालाई लक्षीत गरेर आयोजना गरिएको सिप सिकाई तालिमबाट महिलाहरु आत्म निर्भर हुन सक्ने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्काले बताईन् । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले महिलाहरु ब्यवसायमूखी होउँन भन्ने उद्धेशयले यस्ता खालका कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए ।